တရုတ်လက်ျာအားကစားအစားအစာများကိုရွေးချယ်ပါ, သင့်ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏ရလဒ်များကိုမဖြုန်းတီးပါနဲ့! ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Bracefactory
elasticity ဒူး ထောက်.
မွေ့ယာ & ခေါငျးအုံး
Silicon ခြေလျင် CARE
စော်ကားခြင်းကို & pads
လေ့ကျင့်ခန်းမီနှင့်အပြီးအာဟာရဖြည့်စွက်လေ့ကျင့်ခန်းသူ့ဟာသူအဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးလှသည်။ သငျသညျကိုသာအာဟာရဖြည့်စွက်အဖြစ်ပရိုတိန်းအမှုန့်အသုံးပြုချင်ကြဘူးလျှင်အဘယ်အစားအစာများကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကို restore ကူညီပေးနိုငျသနညျး
သြစတြေးလျအာဟာရ Zoe ကို Bingley-Pullin ဘိုဟိုက်ဒရိတ်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီစွမ်းအင်ဖြည့်စွက်၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လောလောလတ်လတ်ညှစ်ဖျော်ရည်သို့မဟုတ်လုံးဂျုံ crackers လည်းကောင်းသောရွေးချယ်မှုကပြောသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သောမုန်လာဥနှင့်ချိုမြိန်အာလူးအဖြစ်အမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားသုံးခြင်းအစွမ်းသတ္တိကို restore လုပ်ဖို့ကူညီပေးပါပါနှင့်။
သြစတြေးလျအာဟာရ Zoe ကို Bentley-Pullin အစားအစာရွေးချယ်မှုလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ကပြောသည်။ သင်အားကစားခန်းမကိုသွားနေတယ်ဆိုရင်, ရှေ့မှာတစ်ခုခုစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်, Zoe ကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကိုပေးဘိုဟိုက်ဒရိတ်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီစွမ်းအင်ဖြည့်စွက်၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။
အသီးတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအပိုင်းပိုင်း, ရောထွေးခြောက်ကပ်သောအသီး၏လေးပုံတစ်ပုံခွက်ကိုသို့မဟုတ်လောလောလတ်လတ်-ညှစ်အသီး & ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်ခွက်စွမ်းအင် replenish ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအလေးအဖြစ်က high-စွမ်းအင်အားကစားလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားလျှင်အပြင်, ခွံမာသီးထောပတ်သို့မဟုတ် ricotta နှင့်အတူ coated လုံးစပါးကို crackers တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအပိုင်းပိုင်း, ဆန်ကိတ်မုန့်ပိုကောင်းတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အလားတူပင်လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်ညာဘက်အစားအစာအစွမ်းသတ္တိကို restore ပြန်ဖို့အတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက် 30-60 မိနစ်စွမ်းအင် replenish ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Zoe ကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသည်နောက်, ဒါကြောင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတိန်းကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုစားရန်သင့်လျော်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။
သငျသညျအစာစားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လုံလောက်သောအချိန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, အချို့သောမြန်ဆန်မုထိုကဲ့သို့သောခွံမာသီးသီးနှံအရက်ဆိုင်, အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လှုပ်သို့မဟုတ်ရောထွေးခြောက်အသီးနှင့်အတူ High-ပရိုတိန်းဒိန်ချဉ်အဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှု, ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်အနည်းငယ် crackers သို့မဟုတ်ဆန်ကိတ်မုန့်နှင့်အတူမုန်လာဥ, ချိုမြိန်အာလူးနှင့်အခြားအမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါင်း hummus သို့မဟုတ် ricotta, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပြုတ်ကြက်ဥတူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
Add: F8, Bldg 1 Anchi လမ်း, Jiading 201805, ရှန်ဟိုင်း
လက်ျာအားကစားအစားအစာများကိုရွေးချယ်ပါ, စွန့်ပစ်ကြဘူး ...
မလိုဘဲအလွယ်တကူခြေလျင်ခရီးလေး Key ကိုအမှတ် ...
compression ခြေကျင်း Brace, ခြေကျင်း Brace, elastic ဒူး, lumbar သတ္တုအထိမ်းအချုပ် , အားကစားဒူး Brace , elastic ဒူး Brace,